प्रचण्ड अस्पताल भर्ना::देश र जनताप्रति समर्पित
काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अस्पताल भर्ना भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड दाँतको उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका हुन् ।
प्रचण्ड दाँतको उपचारका लागि ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएकाे बताइएकाे छ । बारम्बार दाँत दुख्न थालेपछि बुधबार दिउँसो प्रचण्ड मेडिसिटी अस्पताल पुगेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
प्रचण्डको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले दाँत नि’काल्न सुझाव दिएका छन् ।
नेताकाे आडमा तिर्न मानेनन् सुमार्गिले ४ अर्ब ३१ कराेड ९८ लाख कर
बिरामी नेताले थेगेको देश, कुन नेतालाइ के रोग ? हेर्नुस्
सत्तारुढ नेकपामा ३२ विभाग, १८ पूर्व एमाले र १४ पूर्व माओवादी, वामदेव बने संगठन बिभाग प्रमुख
ओलि, प्रचण्ड द्धारा ७७ जिल्ला नेतृत्वको घोषणा हेर्नुस कहा को नेता भए ?
महरा अस्पताल भर्ना रिपोर्टको प्रतिक्षामा अस्पताल केहि दिन अगाडी गिरफ्तार भएका निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अस्पताल भर्ना भएका छन् । प्रेसरको समस्या देखिएपछि महरालाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको हो...
पोखराबाटै सेतो पुतली “सापु” रोगको सुरुवात,स्मृतिले गुमाए आँखाको ज्योति संखुवासभा – संखुवासभामा सेतो पुतलीको प्रकोपका कारण एक जनाले आँखाको ज्योति गुमाएका छन । खाँदबारीकी स्मृति घिमिरे ले आँखाको ज्योति नै गुमाएकी हुन। अहिलेसम्म खाँदबारीकी...